अक्सिमिटर : किन प्रयोग गर्ने र कति पर्छ मूल्य ? – AB Sansar
May 15, 2021 santoshLeaveaComment on अक्सिमिटर : किन प्रयोग गर्ने र कति पर्छ मूल्य ?
पल्स अक्सिमिटरका फाइदा।बजारमा थरीथरीका पल्स अक्सिमिटर पाइन्छ । यसका आफ्नै छुट्टै विशेषता हुन्छन् । तर यसको फाइदा भने समान खालको हुन्छ ।सबैभन्दा मुख्य फाइदा भनेको त फोक्सोमा निमोनियाको मात्रा आकाशिनुपूर्व नै यो प्रविधिको प्रयोगले हामीलाई सचेत गराउन मद्दत गर्र्छ । पल्स अक्सिमिटरले शरीरको स्वास्थ्य परीक्षणमा निम्न फाइदा गर्छ ।समयको साथमा अक्सिजनको मात्राबारे निरीक्षण गर्न
रगतमा अक्सिजनको मात्रालाई पर्सेन्टेजको आधारमा नाप्ने गरिन्छ । शरीरमा रातो रक्त समूहको आधारमा शरीरमा अक्सिजन स्याचुरेसनलाई पर्सेन्टेजमा बताउने गरिन्छ । उदाहरणको लागि यदि कुनै पनि व्यक्तिको अक्सिजन लेभल ९६ प्रतिशत देखाएको छ भने रगतमा अक्सिजनको मात्रा केवल ४ प्रतिशतको कमी छ ।कति हुन्छ स्वस्थ व्यक्तिमा अक्सिजनको लेभल ?
आ,गो निभाउन श्रममन्त्री श्रेष्ठ हेलिकप्टर लिएर दमौली पुगे
March 6, 2022 Ab - News
फेरी एक हप्ता कार्यालय हरू बन्द? हेर्नुहोस् कुन् कुन् हुन् ती कार्यालय
February 12, 2022 santosh
दुई देउरानी जेठानी मिलेर पैसाको लागि देवर’को ह’ त्या (भिडियो हेर्नुहोस)
November 30, 2021 Ab - News